खाना हातले खाने कि चम्चाले ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalखाना हातले खाने कि चम्चाले ?
Home स्वास्थ्य खाना हातले खाने कि चम्चाले ?
खाना हातले खाने कि चम्चाले ?
मानिसमा आधुनिकरण बढ्दै गएको छ । कति मानिस चम्चा तथा काँटाले खानेकुरा खाने गर्दछन् । अध्ययनले बताए अनुसार विश्वभरको तत्थ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै जसो मानिसले चम्चा तथा काँटाले खानुभन्दा हातले खानुमै सहज मान्छन् । यद्यपि हातले खाना खाने विषयलाई लिएर विभिन्न खाले धारणाहरु नभएका होइनन् ।
कतिपय योग विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुले समेत हातले खाना खाने क्रममा हाम्रो हातका अन्य औँला तथा बुढीऔँलाबीच मिलन भएर एउटा मुद्रा बन्ने र त्यो मुद्राले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पूराउने बताउँछन् । भोजन विज्ञका अनुसार खाना पकाउने प्रक्रिया पनि भावनात्मक विज्ञानमा आधारित रहेको छ ।
भोजन तयार गर्ने, पकाउने तथा पस्किने प्रक्रियामा पकाउने वा पस्किने मानिसको प्रेम पनि समाहित भएको हुन्छ, जसले आफ्नो प्रभाव छोड्दछ । विभिन्न अध्ययन अनुसार हातले खाना खाँदा जुन तृप्ती मिल्दछ त्यो चम्चा वा काँटाले खाँदा मिल्दैन । आयुर्वेदका अनुसार सिधै हातले भोजनको स्वाद लिँदा त्यो बढि पौष्टिक तथा स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ । भोजनहरु खिचडी, दाल९भात, हलुवा, रोटी जस्ता परिकारहरु खानुको असली आनन्द हातबाटै प्राप्त हुन्छ । हातले खाना खाँदा खानेकुरालाई मुछ्ने र हातसम्म पूराउने प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
यसलाई माइण्डफुट सेटिङ पनि भनिन्छ । त्यसैले हातले खानु भनेको चम्चा वा काँटाले खानुभन्दा बढि लाभप्रद छ । माइण्डफुट इटिङका अन्य केही फाइदा पनि हुन्छन् । ती मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको यस्तो प्रकारको खुवाइले खानामा भएका पोषकतत्वहरु सरीरले सजिलैसँग लिन सक्छ । साथै पाचन प्रक्रियामा सन्तुलन आउने र पेटको गडबडी पनि कम हुन्छ । प्राकृतिक विज्ञानका अनुसार हातले खाना खाँदा हामीले थालमा रहेका खानेकुरालाई सही तरिकाबाट मिसाउन पाउँछौँ । यदि चम्चाले खाने हो भने त्यो काम पेटले गर्नुपर्छ ।
भोजन ग्रहणका बेला पलेटी कसेर बस्दा सुखासनको मुद्रा बन्दछ । यसबाट स्वाद ग्रन्थीहरु सक्रिय हुने र भोजन सही ढंगले पेट सम्म पुग्ने र राम्रोसँग उपापचयन हुन्छ । जब चम्चाले खाइन्छ तब हामीलाई थाहा हुँदैन की तरकारी वा खाना काँचो छ वा राम्रोसँग पाकेको छ । चिसो छ वा तातो छ ? तर हातले खाना खाँदा हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ । यसले खानाको प्रकार वा अवस्था अनुसारको पाचन रस उत्सर्जन गर्नका लागि हाम्रो मस्तिष्कले सम्बन्धित ग्रन्थीहरुलाई निर्देशित गर्न पाउँछ । पाचन रस सही ढंगले उत्सर्जन भयो भने खानेकुरा राम्रोसँग पच्दछ र पोषक तत्वपनि सरीरले राम्रोसँग ग्रहण गर्दछ ।
रोनाल्डोको दुई गोलले युभेन्टसको सहज जित
प्रचण्डले दिए विश्वविजेता महेश्वर महर्जनलाई सरकार र पार्टीको तर्फबाट सहयोग गर्ने वचन